Kutheni i-OneDrive yam ivaliwe? - Faq
Eyona > Faq > Iakhawunti ye-Onedrive efriziwe-isisombululo
Iakhawunti ye-Onedrive efriziwe-isisombululo
Kutheni i-OneDrive yam ivaliwe?
EyakhoOneDriveakhawunti ibaivaliweukuba awungeni kwi. yakho kangangeenyanga ezili-12OneDriveakhawunti okanye ukuba ungaphezulu komda wokugcina, nokuba usebenzisa ezinye iinkonzo zeMicrosoft.
Hayi Youtuber, nguCharlie kwaye kule veki kuye kwafika ngqo kwiKorra. Zimbini iziqendu ezishiyekileyo. Kwakungekho zindaba zokucebisa ukuba bazokuyithumela ngexesha kwi-Intanethi njengonyaka ophelileyo ngeNcwadi yesi-2 yokuGqibela, kodwa uJanet Varney kunye nabanye abadlali belizwi bakhankanye ezinye zezinto ezenze ukuba le Finale yalo nyaka yahluke.
Ngoku sinalo lonke ixesha le-WTF kunye nesiqendu sam 11 esijonga emva kwethu, ndiza kuchaza. Xa uqala ukundifumana ndenza amanqaku eKorra veki nganye. Qinisekisa ukuba uyarhuma ukuze ufumane yonke into.
Kwaye kwabo bazibuza ukuba ingaba uKorra uza kubhabha, ndizakwenza amanqaku ebhonasi okwethutyana kwaye emva koko ndiqale ukwenza iMvukelo yaMfazwe. Oku kuya kuba ngumboniso wangoLwesihlanu ukusukela ngo-Okthobha xa ngesiqhelo simbona uKorra sizakubukela nje lo mboniso. Utshintsho oluhle nolulula.
Ungalibali ukwenza uqeqesho lweKorra okwangoku. Konke okufuneka ukwenze ukuthatha inxaxheba kukubhalisa kwaye ushiye uluvo kule nqaku. Ke qhubeka, balumkele abonakalisi ukuba awukayiboni isiqendu ngaphambili.
Nanga amaxesha am aphezulu e-5 e-WTF asuka kwisiqendu. Ukuqala ngenombolo 5-I-Chaos kwiBa Sing Se khange ndilindele ukuba uZaheer abulale uKumkanikazi woMhlaba, kodwa kujongeka ngathi yenzile. Zeziphi iindaba ezimbi zokuphela kwesi siqendu.
Kodwa isixeko ngoku sisiqhwithi esipheleleyo kwaye wonke umntu uyaphanga. Indikhumbuza amaxesha amnandi ezimbalini xa ubukhosi obukhulu bawa. Njengokuwa kweRoma xa iiVandals zaphanga isixeko zaza zabaleka nobunye ubuncwane bobukumkani baseRoma.
Kulapho ke livela khona igama lokonakaliswa. Oko kwenzeka ngexesha lokuwa nokuwa koBukhosi baseRoma. Emva kokuba urhulumente ewile, iYurophu yangena ebumnyameni.
Eyona yayiyiminyaka ephakathi. Kwakuyixesha eliphakathi kokuwa kweRoma kunye neRenaissance. Ngaba leyo yindlela uKorra ahamba ngayo? Lowo ngumbuzo olungileyo.
Kwakungekho zaheer ebomini bokwenyani, kwakungekho mntu utshabalalisa iRoma. Yayiyinkqubo ende, ethe chu. Impendulo kuko konke oku yayikukuvuselelwa.
Igama lokuvuselela lithetha 'ukuzalwa kwakhona'. Kwakuyixesha emva kokuveliswa kwamaphepha kunye neeleta zentsimbi ezihambisekayo xa izimvo zoyilo zinokusasazeka. Yaba yintshukumo enkulu yenkcubeko kulo lonke elaseYurophu eyangenisa ixesha elitsha lokucinga, ubugcisa, inkcubeko kunye noluntu.
Buyela umva apho sikhona eKorra. Ngoku sikwimeko kaBa Sing Se, oko kuthetha ukuba umhlaba uza kungena 'kulambatha', ngokungathi kunjalo. Ixesha lesiphithiphithi uZaheer azama ukudala ukuze uluntu luzalwe ngokutsha kwaye luzise ukuvuselelwa okutsha kokukhanya kokomoya.
Yiyo loo nto ndimthanda kakhulu isimilo sakhe, uyaphambana, kodwa ingcinga yakhe iqinile. Oko kuyakwenzeka. Abantu baya kufumana indlela yokuphumelela nokuba kunjani.
Iminyaka eyi-100 yalwa ngokuchasene nokunyuka kwe-Aang kunye nexesha elitsha loxolo. Leyo yayiyinguqulelo encinci yento uZaheer awaye kuyo. Uzama ukutshisa intsimi phantsi ukuze izityalo ezitsha zikhule zomelele kunakuqala.
Asikazi okwangoku ukuba kuya kwenzeka ntoni kwiNcwadi 4, ke akukho nto ichazayo ukuba isicwangciso sakhe siyokuhamba kude kangakanani. Ngexesha leMakos neBolins bekukho izinto ezimbalwa ezimangazayo ezibalekayo esixekweni. Ubukhulu becala uMakhulu, ubotshelelwe kumfanekiso wakhe weNdlovukazi yoMhlaba.
Ndiyathemba ukuba bayakuchaza ukuba kungenxa yokuba uvele wanamathela kwiindlela zakhe. Okanye ukuba unonxibelelwano olukhethekileyo kunye nokumkanikazi. Mhlawumbi bamenza inkani nje ukuze uBolin abenalo ixesha lokumphosa egxalabeni lakhe njengengxowa yeetapile.
Ndiza kuthetha ngakumbi malunga nokujonga kwam. Ukuqhubela phambili kwinombolo ye-4-i-Suyin kunye ne-Metal Bending Clan Pair yeeflegi ezinkulu ezibomvu apha. Okokuqala, ukuba uwabonile amanqaku am angaphambili eKorra, uyazi ukuba andimthembi kwaphela uSuyin.
Kwaye kukho ithuba lokuba i-clown persona ikwiqela labo lesekisi uZaheer. Oko akuqinisekiswanga okanye nantoni na, kodwa umzuzu uSuyin athe masizise umkhosi weetamers zentsimbi ezinezakhono eziphezulu ezinyanisekileyo kum. Ndandinemvakalelo yokuba iQela Korra lalikhokelwe yintlekele.
U-Suyin uziva ngathi ngumntu oza kusela i-kool-aide kaZaheer ukuze angenise uhlaziyo olutsha. USuyin akanomdla kwimithetho yelizwe likaLin. Kungenzeka ukuba iyinyani ngokupheleleyo.
Andiqondi ukuba uyakuba nomsindo okanye nantoni na. Ubonakala nje engumthetheleli kaZaheer. Kodwa ungandazisa ukuba uyavuma.
Ukuba bendinguKorra okanye uLin, andazi nje ukuba ndingaziva ndikhululekile ukudweba iqela elikhulu lomlo emfazweni ukuba andiqinisekanga ukuba banyanisekile kum endaweni yokunyaniseka kwabo bathandabuzayo Dade. Nangona kunjalo, ndandizithanda kakhulu izixhobo zikaSuyin. Ngaphambi kwayo yonke into yokugoba isinyithi ngeli xesha lonyaka, ukubeka isikrweqe sakho kusasa yenye yezinto endizithandayo zokugoba ukulandelelana kweLin.
Ufumene indoda yakhe yentsimbi ukuba ayiphephe. Ukuthetha ngalo, ndiyazi ukuba uninzi lwenu ucinga ukuba uBolin uzakufunda ukufunda uLavabend endaweni ye-Metalbend. Kubonakala ngathi ungafunda enye yeendlela ezinzima zokuthoba, ungafunda enye.
Zizo zombini iifom zomhlaba. Ngokwesiqhelo yinto nje yokomoya. Ndiyazi ukuba ezona ndlela ziphambili zokuguqa zibotshelelwe kumnombo, kodwa ukuthoba asiyonto ye-Midichlorian bullshit yemfuza.
Ukuqhubela phambili kwinombolo yesi-3-uKora udibana no-Iroh kwakhona. Yayimangalisiwe loo nto, yayingaqhelekanga kunye nexesha, kodwa yamkelekile. Ingakumbi bahlawule umzuzu noZuko.
Ndiyamangaliswa kukuba ayothusa uIrohwas kwelemimoya. Ungacinga ukuba uZuko ufikelele kwinqanaba lokomoya elingamvumela ukuba akwazi ukunxibelelana no-Iroh, kodwa ndicinga ukuba akunjalo. UKorra wazama ukusebenzisa iindlela zikaZaheer ngokuchasene naye.
Mbizeni kummandla womoya. Kwimeko apho uphoswe yingcebiso uIroh wayinika uKorra. Ukufumana izinto obungakhange uzikhangele kwakwalicebo elifanayo awalinika uZuko omncinci xa babefihle eBa Sing Se.
Ndihlala ndiyithanda xa uMike noBryan bezisa amaxesha okugqibela eAirbender kuthotho olutsha. Umzuzu we-Iroh wawungekho ndawo, kodwa cinga njengohlobo olufutshane kakhulu lwesiqendu se-Iroh kwiNcwadi 2. UKorra ufuna isifundo kuYoda ngaphambi kokuba abalekele kwiNkanyezi yokuFa ajongane noDarth Vader kunye noMlawuli.
Kwaye xa wayethetha noZuko, kwakungathi uyamxelela ukuba u-Aang usweleke ekhusela ii-airbenders. Uye wabuya umva kancinci wathi u-Aang ubenoxanduva olukhulu kwihlabathi. Kodwa enye into kukuba wathi u-Aang wabulala iqela i-Zaheerif ngaphambi konyulo.
Nokuba ukubulala yenye yeetaboos ezinkulu zesizwe somoya. Mhlawumbi oko kuthetha ukuba uZaheer akangomntu womoya ngenene? Inxalenye yetempile yesiqendu ibisentla nangaphaya kwayo nantoni na endiyibonileyo kumdlalo. Ndibathanda kakhulu oopopayi beziqendu ze-Avatar Wan kunyaka ophelileyo kuba bebehlukile kodwa beziqendu eziqhelekileyo zeKorra.
Ngukumkani omtsha wokulwa. Ndiyazi ukuba bendibhekisa kwi-Star Wars kunye no-Iroh kunye no-Yoda ngaphambili, kwaye kuyavakala ukuba iingcinga zam ziya ku-Obi-Wan Kenobi, owalwa noDarth Vader kwisiqendu 4 xa uZaheer noTenzin balwa nohlobo olufanayo lokuphela banike uKumkanikazi woMhlaba, ke xa eswelekile kubonakala ngathi bafuna sikholelwe ukuba noTenzin ufile. Ndiza kungena kuloo mzuzwana.
Kodwa ndonwabile kakhulu kukubona ukuba bayayamkela iKai Ming Hua, itamer yokutshiswa komzimba. Bendingalindelanga isiphelo esibuhlungu ke ndicinge ukuba xa eyichola uyayicima i-airship ngesindululo sokuguqa okuhle. Njengokuba uLin ebeka i-airship ezantsi kwiNcwadi 1 ngaphambi kokuba u-Amon avimbe izakhono zakhe zokugoba.
Umboniso wabantwana ke ndiyasiqonda isizathu sokuba basibonise ukusinda kunye nokuhlangulwa kweenyathi eBabyair ekugqibeleni. Ndicinga ukuba banokuwunqamla loo ndawo, isiqephu xa sisonke besinokuba nobunzima obukhulu. Kodwa ndiyayiqonda inkxalabo.
Ukuba babakhokele abantwana ukuba bakholelwe ukuba uKai ubhubhile, uNick ngewayenokufumana isigidi seeleta ezivela kubazali babantwana abalilayo. Ndiyazi ukuba uninzi lwe fan luyasicaphukela isimilo sakhe, ke akukho sigwebo. Ukunyaniseka, ubuya kuba ulungile xa bembulala.
Ukuba uMike noBryan babemvumele ngokusesikweni uKai ukuba asweleke ekwindla, ngendilungile kuloo nto. Kodwa kwakhona, ukubulala abantwana ayisiyonto uyibonayo kuKorra. Noko andikhumbuli bekhe babulala umntwana.
Ubuncinci ngendlela ecacileyo. Ijethi evela kwi-airbender yokugqibela yenye yezona zinto zimbalwa ngaphandle. Kodwa wayengengomntwana mncinci, wayemdala kunabo bonke abantu kwiqela le-Avatar.
Kwaye okungakumbi Inqaku lam le-WTF leNombolo 1-Iqela uZaheer libulala iTenzin Ngaba sonke singavuma ukuba ubuncinci umboniso ufuna ukuba sicinge ukuba bambulale. Ndiqinisekile yonke into iyakutyhilwa kwisiqendu 12. Kodwa ngelo xesha, uTenzin uyakube eshiye oku kufayo, ngenxa yendlela izinto eziye zehla ngayo neNdlovukazi yoMhlaba.
Kuba esi sisihloko sesiqendu 12, kodwa ingeyiyo eyokugqibela, ndinomdla wokwenene ukubona ukuba uKorra uza kuba nohambo olukhulu lwe-astral kwincwadi yesi-4. Eyona ithiyori ndiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku kukuba uZaheer ufuna ukwala uKora , Raava, kunye neVaatu. Oko kukhokelela kwiingxaki ezithile ezisengqiqweni ezisekwe kwinto eyenzekileyo kwiNcwadi 2.
Kodwa ukuba uZaheer sele eyifezekisile injongo yakhe yotshintsho, yeyiphi enye into anokuyidinga uKorra kunokuba engenakuzenza yena? Ufuna amasango avulekileyo, kwaye avuliwe. Ke ayinanto yakwenza naloo nto. Unokuzama ukuseta kwakhona izinto kwimeko ye-wan ngaphambi kwe-avatar.
Oko kukuthi, kufuneka abulale uKorra ngelixa ekwimeko ye-Avatar. Ingaphelisa umjikelo we-avatar. Xa oko kusenzeka, ndicinga ukuba unxibelelwano lukaRaava luza kwaphuka.
Andiqondi ukuba uRaava angayeka ukubakho. Ndazise ukuba ucinga ntoni uZaheer ufuna uKorra. Kodwa nje ukucacisa ingxaki kaLava Vaatu: Ngexesha lokugqibela leNcwadi 2.
I-Raava yacinywa, yabuyiselwa kwimeko yayo enguziro. Kwiimeko eziqhelekileyo, wayeza kuvuka eVaatu kwiminyaka eyi-10 000. Nokuba ungabaliphi ibali, umboniso uboniswe kwesi siphelo.
Awunakuze ubulale okubi okanye okuhle. Zizinto ezisisiseko zobukho. Iimpawu ezilungileyo nezingalunganga ziyindlela nje yethu yokuchaza imeko yobukho.
Ke unokuthiya igama elithi Raava kunye neVaatu ngokwahlukeneyo, kodwa akunakuze kutshatyalaliswe kwaphela. Bacinezelwe kuphela kangangexesha leminyaka eli-10 000. Kwisiphelo sonyaka ophelileyo, uJinora wanyanzela uRava ukuba avele kwakhona.
Le yindlela onokuthi ube nefuthe ngayo kumjikelo wakho. Kodwa awungekhe uyeke. Ke ndinengxaki yokucinga ukuba i-Avatar 'yahlule' u-Wan Raava kunye noVaatu.
Ukuba oko bekuyinyani, uJinora ngekhe anike nayiphi na indawo kaRaava kwiVaatu ukuba ayikhuphe. Oko kuthetha ukuba zange bohlukaniswe ngokwenyani. Ingxaki enkulu ukuba ndizama ukungacingi kakhulu, kodwa undazise ukuba zithini iingcinga zakho ngoRaava kunye neVaatu kwaye ukuba inento yokwenza nencwadi yokugqibela ye-3, uloyiko lokubulala umntu othandwayo kunye nokujongana noopopayi abamangalisayo zonyaka.
Inqaku lokudibanisa macala onke, iiLin Souyinscenes ezikwi-airship zirhuqe kancinci. UIroh wayephumile kancinci endaweni, kodwa iyonke yayimangalisa. Eyona nto indibethileyo kukungxamela kwabo indawo yeKorra yesiqendu, ke yiza kuleyo ndawo.
Ndizithandile kakhulu izingcingo ezivela ku-Iroh Zuko Last Airbender, nokuba kujongeka ngathi uZuko iseyindawo encinci ye-cadet kwiminyaka yakhe. Indlela awaziswa ngayo kwindalo iphela yeKorra yayifana ne-Iroh entsha. Njengokuba ebephumelele kwinqanaba elithile lokukhanyiselwa kwiminyaka ukusukela oko kwasekwa iRiphabhlikhi yesixeko kunye nokushiya kwakhe njengenkosi yomlilo.
Ndicinga ukuba bafuna umnxeba wokubuyela emva, ke uZuko ngu-Obi-Wan Kenobi ngandlela zonke, njengoTenzin. UZuko, obiza intombi yakhe kwesi siqendu, undenza ndizive ngathi ngokuqinisekileyo siza kubonana kwiNcwadi 4 amaxesha amane okuqhula umlinganiswa kwaye singabonisi. Ndiyazibuza ukuba kutheni singekababoni.
Kuvakala ngathi ubona ukuba ngubani lo utyhila iimfihlo ezithile ezinde. Utshate nabani uZuko? Ezona ithiyori zibalaseleyo ndizibonileyo zonke ngoMeyi. Kodwa andazi ngee-comics, kwaye ndiyazi ukuba ii-comics ziveze kancinci malunga nokuba kunokwenzeka ngamadoda.
Ukuchaza nje ukuba uthini uJanet Varney kunye nabalingisi malunga nencwadi yokugqibela ye-3. Bathe akukho dabi likhulu lokomoya njengamaxesha aya kuhamba. Oko kuthetha ukuba uKorra akunakulindeleka ukuba alwe kakhulu neQela uZaheer.
ikhowudi yempazamo 0xc0ea000a
Uya kuzincama kwaye anyathele ngokusweleka ekufeni. Kubonakala ngathi bonke abantu ababalulekileyo bayafa ngeli xesha lonyaka. Kukho incwadi yeKorra yesi-4 apho uJanet Varney eyinkwenkwezi.
Nokuba uKora uyazincama, andicingi ukuba uya kuhlala eswelekile. Okanye ufe ngokupheleleyo. Oko kuphakamisa imibuzo emininzi kunokuba iphendula.
Kodwa ndiza kulinda de kube sisiqendu se-12 ukuze siqhubeke nokuqikelela kwiNcwadi4. Okwangoku, sivuyisana nomntu ophumeleleyo kule veki. Li Cheng, uphumelele ikhadi lesipho laseAmazon, ndiza kukuthumela umyalezo kwisitishi sakho ukuze ufumane iinkcukacha Cofa apha ngoku kwinqaku leKorra leveki ephelileyo kwaye ucofe apha ukufumana konke malunga nabahlali abakwi-Star Wars Isiqendu 7.
Enkosi ngokubukela. Ndizokubona namhlanje ebusuku. Betha izandla phezulu!.
Kutheni le nto ndifuna i-OneDrive?
Ngaba idrive enye?
KunyeOneDriveabantu banokugcina, bahlele kwaye babelane ngeefayile kwi-intanethi. Unokusebenza kuxwebhu nomnye umntu. Inkonzo yokugcina inokusingatha zonke iintlobo zeefayile, ezinjengamaxwebhu okubhaliweyo, iipredishithi, umculo kunye neefoto. Inkonzo yokugcina inokusetyenziswa njengesixhobo sokugcina.28 kweyeThupha. 2019
I-eTop Technology, Inc. Ukugcina iifayile zakho efini apho zinokwabelwana khona ngomsebenzi wentsebenziswano xa kufuneka umbono olungileyo, awunyanzelekanga ukuba uthumele nge-imeyile okanye udlulise iifayile zakho, kwaye iDropbox yayiyeyona nto ingumzekelo wokuqala owaziwayo namhlanje. Ukuba uneOfisi 365 efakiweyo, sele unayo iOnedrive kwaye ukuyimisa, vula ibar yomsebenzi yakho yeWindows, fumana iOnesrive phantsi kuka'O 'kwaye ucofe kuyo Itop Technology, Inc. ukuvula idilesi yemeyile yeakhawunti yakho yeOfisi 365 kwaye uza kucelwa ukuba ufake ipassword uze uyifake kwaye iWindows izakucwangcisa iakhawunti yakho yeOnedrive Ungangqamanisa iifayile zakho zeOnedrive kunye nePC yakho, nokuba yeyiphi na into osoloko ubona inguqulelo yamva nje idatha yakho kwaye yiyo.
Okwangoku ufumana ii-gigabytes ezi-5 zesithuba sasimahla, kodwa ungongeza indawo yokugcina xa kufuneka uthenge indawo kwaye oku kulungile xa kuthelekiswa ne-Dropbox's 2 gigabytes yendawo yasimahla Yivule kwaye ubone ukuba isebenza njani ekunene nqakraza i-Windows system tray icon ukuvula iFayile Explorer . Uya kubona ukuba ndineeakhawunti ezimbini ze-Onedrive, enye yobuqu kunye neakhawunti yam ye-eTop yeTekhnoloji kwindawo yakho yokufikelela ngokukhawuleza, xa ndiyikhetha uya kubona ukuba yongezwa kwiribhoni yiTop Technology, Inc.Ndingabeka ibar yesixhobo phantsi kweribhoni ukuba ndiyafuna, kodwa ndikhetha ngaphezulu.
Ngoku kuyinto elungileyo ukwenza iifayile zeefayile zakho kwifolda, ke kuqala masongeze ifowulda entsha kwibar yesixhobo kwaye ndiza kubeka umqeshwa wam apha amaxwebhu ukuze ndibabize Ngezibonelelo Zoluntu. Uyabona ukuba uphi ngokulandela isonka apha kwaye banokucofa kwidesktop ukuba bahambe ngokukhawuleza ndinespredishithi esigqibeleleyo endisebenza kuso kwindawo yokutya abasebenzi endifuna ukuyigcina kwenye indawo kwaye ndifuna ukuba sabelane ngayo Iqela eliququzelela ukutya neziselo, ke indawo elungileyo iya kuba yifolda yoLuntu kunye nokuhambisa yonke into endinokuyenza kukubamba iqhosha lasekunene le mouse kwaye uyihudulele kwifolda evulekileyo xa ndishiyekile ndicofa kwaye ndirhuqa, ndenza ikopi kwaye ndiyibeka kwifolda, kodwa xa ndicofa ekunene kwaye ndirhuqa, iiWindows zinika iindlela zokukopa, ukuhamba, okanye ukwenza indlela emfutshane andifuni ukuba kwenziwe iikopi ezininzi ngenxa yoko ndibetha nje isigqibo sam yishukumise kwaye imisebenzi oyenzileyo uyibone ikwifolda echanekileyo kwaye ngoku uyenzile Masizame ukuyabelana ngayo. Xa ndikhetha yonke incwadi eneenkcukacha uphawu lokwabelana olujika lube ngwevu kwaye oku kuyadideka ekuqaleni kuba unokucinga ukuba awunokwabelana ngefolda, kodwa makhe sihlolisise itheyiphu yokwabelana, ungathumela ngefowuni yonke incwadi okanye ucinezele ifayile ye-azip ungayitshisa kwiCD okanye kwiDVD okanye uyithumele ngefeksi yonke le nto kwaye nokuba ngubani ngaphandle kwamagqwetha asebenzisa ifeksi kwezi ntsuku kodwa xa sivula ifolda kwaye sikhethe ifayile nganye i-icon yesabelo ayisekho ngwevu cofa kuyo kwaye uya kufumana ezinye ezongezelelweyo Ukwabelana ngeendlela onokwabelana ngazo kweziapps yingcamango enkulu kakhulu ukuba unokwazi ukujonga iifayile ngeendlela ezahlukeneyo, ukuba uqhelene Windows 10 ezi ziya kwaziwa kwaye ekugqibeleni masijonge iindlela ezahlukeneyo zokwabelana onokukhetha ukwabelana ngazo kwifayile okanye ifolda kunye neqela lakho lasekhaya kwaye udale iqela lasekhaya, ukuba awunayo okanye ungabelana ngayo nabantu abathile endaweni yokwabelana naye wonke umntu, i-onedrive ikuvumela ukuba ukhethe umntu ngedilesi ye-imeyile kwaye ubathumele ikhonkco kwifayile , ke tha nguye yedwa kwaye nguye kuphela onokuyivula.
Xa ufuna ukuyeka ukwabelana, yiya kwi-Ribbon yesabelo kwaye ucofe nje i-icon yokumisa ngoku ukuba uyazibuza ukuba yintoni le nto yokujonga uphawu oluhlaza kwiifayile zakho ezithetha ukuba ziyangqinelana xa ingeyonxalenye ilungileyo linda ukuze ungalahleki nayiphi na idatha ngenxa yoko esi sisiqalo esilula kwidrive Indlela yasimahla yokugcina nokwabelana ngeefayile zakho ezisimahla kwiOfisi 365. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi, nxibelelana ne-eTop Technology Silapha ngenxa yakho ukuba uyawathanda la manqaku nceda ubhalise kwisiteshi sethu seYouTube, ukuba ulifumene eli nqaku liluncedo Jonga amanye amanqaku ethu akutshanje kwaye ukuba ufuna iqabane elitsha le-IT, ndwendwela nceda undwendwele iwebhusayithi yethu iTekhnoloji eNtsha, Inc.
Ngaba i-OneDrive iyimfuneko?
IMicrosoftOneDrive(Ngaphambili iiWindows Live Folders, iiWindows Live SkyDrive kunye neMicrosoft SkyDrive) yinkonzo yeWindows Live yokugcina iifayile kwi-Intanethi. Umntu unokubeka iifayile zekhompyuter kwi-Intanethi emva koko azivule kwakhona nakweyiphi na enye ikhompyutha nge-intanethi.
Nazi i-OneDrive zam eziphezulu zeengcebiso zeShishini kunye namacebo. I-OneDrive yeShishini yinxalenye yesicelo sesicelo seOfisi 365. Esi sixhobo sinamandla sikunika ukwabelana ngokulula, ukuphuculwa kokhuseleko, kunye nokuphatheka okufanelekileyo kwazo zonke iifayile zakho.
Nazi i-10 zam eziphambili ze-OneDrive zeNgcebiso zeShishini kunye namacebo. Inombolo 1 - imbali yenguqulo. Xa ungena kwi-portal yeOfisi 365 kwaye uye kwi-OneDrive, uya kubona uluhlu lweefayile.
Ukuba wophula iifayile ezizezakho, uya kuqaphela ukuba kukho ichaphaza elingamachaphaza ngasekunene kwefayile nganye. Oku kuyakuzisa imenyu xa ucofa kuyo kwaye kukho inketho yembali yenguqulo. Olunye lweempawu ezintle ze-OneDrive kukuba naluphi na utshintsho olwenzileyo kwaye walugcina kule fayile luya kuguqulwa lube luhlobo olwahlukileyo kwaye uya kuba nokukhetha ukucofa kwenye kwaye uyibuyisele.
Ukujonga kwakhona u-2013
Unokuvula iifayile ezindala kwaye ubone ukuba zijongeka njani ngaphambi kokuba wenze naluphi na utshintsho. Kukunika ubhetyebhetye obukhulu ekufumaneni kwakhona ukuba unefayile eyonakeleyo kwaye ungabona utshintsho ekuhambeni kwexesha. Inombolo 2 - Ukwabelana ngefayile ngaphandle.
Enye yeempawu ezintle ze-OneDrive kukukwazi ukwabelana ngeefayile ngaphandle ngaphandle kombutho wakho. Logama nje umlawuli ekunike imvume yokwenza njalo, ungavula imenyu kwifayile, cofa kwindawo ethi 'Yabelana' kwaye usete umbutho wakho ngokwakhona. Nangona kunjalo, ukuba utshintsha oku kubantu abathile, banokufaka igama ledilesi ye-imeyile yangaphandle kwaye baqonde ukuba bangaphandle kombutho wakho.
Unokongeza umyalezo kwaye ucofe u-Thumela. Lo mntu ufumana i-imeyile enekhonkco kwifayile esandula ukuboniswa kwaye angayifumana ngokuthe ngqo. Ungacofa eli qhosha ukukopa ikhonkco, ulikope kwaye ulincamathisele kwenye i-imeyile okanye uxwebhu ukuze xa abasebenzisi becofa kule referensi bafike kwifayile kwaye iindaba ezimnandi kukuba ungabelana ngeefayile ukuya kuthi ga kwiigigabytes ezili-15, ethi kuthetha ukuba indawo yokukhuphela i-FTP ayisadingeki.
Nantoni na enkulu, unokwabelana ngayo nantoni na kwi-OneDrive. Inombolo 3 - vumelanisa iifayile zasekhaya. Amandla okwenyani e-OneDrive agcina iifayile zakho zalapha ekhaya ngokuvumelanisa.
Unokwenza oku ngokunqakraza ukhetho lwe-Sync phezulu kwiimenyu ze-OneDrive. Ukuvumelanisa kudala indawo ye-OneDrive enefayile ezifanayo kunye neefolda ezigcinwe kwi-OneDrive yakho kwilifu. Ukuba usebenza kwiifayile ezivela kuyo nayiphi na indawo, ziyahambelana kwaye zombini ezi ndawo zigcinwa zisemgangathweni.
Ngale ndlela ungathatha ikhompyuter yakho uhambe nayo, uhambe ngenqwelomoya ngaphandle kokufikelela kwi-intanethi, uhlele amaxwebhu kwaye nje ukuba unxibelelane kwakhona kwi-intanethi iifayile ziya kulungelelaniswa zibuyele efini ukuze ubuye ungqamaniso. Awusayi kuphinda ukhathazeke malunga nokuba yeyiphi na imeko kwifayile njengoko i-OneDrive ikulawula kakuhle oku. Kuba iOfisi 365 ikunika iilayisensi ezintlanu kwii -apps zakho zeOfisi, ungafaka iiOfisi zeOfisi kwikhompyuter yakho yasekhaya nakwikhompyuter yakho kwaye zombini zidityaniswe kwindawo enye kwifayile kwiOneDrive.
Oku kuthetha ukuba njengokuba usebenza, ungasebenza kwifayile, wenze utshintsho kuyo, kwaye xa ufika ekhaya ungavula ifayile enye nohlaziyo. Oku kukunika ukuguquguquka okuninzi xa usebenza ekuhambeni. Inombolo 4-Co-Authoring.
Uku-co-authoring kukunika amandla okuba nabantu abaninzi abasebenza kuxwebhu olunye ngaxeshanye kwaye ungabona ukuhlela okuhleliyo. Ukuba wenza amaxwebhu kwiLizwi, i-Excel, i-PowerPoint, kunye nezinye iiOfisi, unokwabelana nabanye ngeli xwebhu. Xa uyivula kwaye uqinisekisa ukuba uhlela incwadi yomsebenzi kwisikhangeli njengoko kufanele ukuba inguhlobo lwe-Intanethi.
Omnye umsebenzisi angavula uxwebhu olufanayo kwi-intanethi kwaye ukuba ndenza iinguqu ngoku, olo tshintsho luza kubonakala kwiscreen somnye umntu kwaye xa besenza utshintsho uyakubona ukuba zikwangumboniso ophilayo ngoku. Inika ithuba lokudibana ngokwabelana ngokwabelana nge-OneDrive. Inombolo yesi-5 - tsala iifayile ukuze uzilayishe.
Awunyanzelekanga ukuba wenze nantoni na ekhethekileyo ukuhambisa iifayile kwi-OneDrive. Nje ukuba uvule i-portal yakho, konke okufuneka ukwenze kukuthatha ifayile kwaye uyihudule kwaye uyilahle ngqo kwidesktop. Iya kuyikhuphela ngokuzenzekelayo le fayile kwifolda okuyo kwaye uyivumelanise kwakhona kwiCDrive yakho ukuba uvule ukuvumelanisa.
Inani 6 - Recycle Bin. Ukwahlula kwimbali yenguqulo yi-Recycle Bin. Xa uthatha ifayile kwaye uyicima, iya kusiwa kwi-Recycle Bin ngendlela yokuba ungayicofa kwaye uyibuyisele kwindawo yayo yasekuqaleni.
Ngokuzenzekelayo, iifayile zigcinwa kudoti kangangeentsuku ezingama-90. Ziyakucinywa umphelo emva kweentsuku ezingama-90. Inombolo 7 -I-app ye-OneDrive yeselfowuni.
I-OneDrive iyafumaneka njenge-mobile app. Xa uyivula, uya kuboniswa ngeefolda ezifanayo onazo kwi-OneDrive. Ungaya kwifolda kwaye ubone iifayile ezizezinye kwaye unokuklikha kwifayile efana nale Excel kwi-app yeselfowuni.
IOfisi 365 ikunika iilayisensi ezihambayo ezihlanu ukongeza kwezinye iilayisensi ezintlanu kwaye ibandakanya iLizwi, i-Excel, iPowerPoint kunye nezinye iiOfisi zikaMicrosoft. Inombolo 8-Kwabiwe nam. Sibonile indlela onokwabelana ngayo ngamaxwebhu nabanye abantu, kodwa xa abantu besabelana nawe, ezo fayile zikwifolda ekwabelwana ngayo nam.
Oku kuyakubonisa zonke iifayile ekwabelwana ngazo nawe ngabanye abantu kumbutho wakho. Ubuhle bayo kukuba ukuba unike imvume yakho, ungawahlela kwaye uwajonge la maxwebhu, kwaye utshintsho olwenzayo luhlaziywa kwindawo yomnye umntu-bakwi-drive ekwabelwana ngayo. Inombolo 9 - khangela yonke into.
I-OneDrive inesixhobo esikhulu sokukhangela. Ngapha koko, ndicinga ukuba kubhetele kunezinye izicelo ezikwiOfisi. Ngasekhohlo ngasentla kwendawo ye-OneDrive, unokukhangela nantoni na.
Ke xa ndichwetheza igama eliphambili kwaye ndibetha ukungena, liya kukhangela elo gama kuwo onke amaxwebhu akho kwifolda yakho ye-OneDrive. Ungeza apha kwaye ukhethe kwizicelo ezahlukeneyo ezinje nge-Excel kwaye icoca kuphela amaxwebhu e-Excel kwaye ndingayitshintsha imihla. Kwakuyinyanga ezintathu kuphela ezidlulileyo kwaye ngoku ndiyifumene ifayile yam.
Luphawu olukhulu lokucoca ulwelo kwaye lwenza ukuba kube lula ukufumana amaxwebhu naphina kwi-OneDrive yakho. Inani le-10-ukujonga kuqala kwethayile. Kwikona ephezulu ngasekunene ye-OneDrive liqhosha, bonisa izinto zokujonga kuqala iithayile.
Xa ucofa kuyo, iyatshintsha ukufomatha ukuze uyibone kwifomathi yethayile. Zonke iifolda ziyaboniswa, kodwa xa ungena kwifolda uboniswa iifayile ezizodwa ngefestile elincinci lokujonga kuqala ukuze ufumane umbono ongcono wokuba uxwebhu lukhangeleka njani kunoluhlu lwefomathi kwaye xa uliguqula umva ufuna ukucofa eli qhosha kwakhona. Oko kugqiba i-OneDrive ephezulu yeengcebiso zeshishini kunye namacebo.
Ungalibali ukukhangela iingcebiso kunye namaqhinga kolunye uluhlu lokudlalwayo kubandakanya iLizwi, i-Excel, iPowerPoint, iSkype yeShishini, kunye neengcebiso kunye namacebo azayo kungekudala. Enkosi ngokubukela. Hee, ukuba ufuna ukubona amanye amanqaku anje nceda ubhalise kwaye ukuba ulithandile eli nqaku cofa izithupha kwaye ushiye uluvo.
Ndiyayixabisa kakhulu inkxaso yakho!